Nijapy fiara “camion” lehibe iray teny am-pandehanana izy ary nangataka vola tamin’ny mpamily, saingy tamin’izay no nahavotsotra ny tanany tsy afaka namikotra, ka nianjera mafy, ary voahitsaky ny fiara “camion” iray hafa, raha ny fitantaran’ny manodidina. Nentina avy hatrany tany amin’ny polisy ilay fiara nahafaty azy, mba hisorohana ny korontana mety hiseho. Fotoana fohy dia rakotra olona teny an-toerana, ka nanahirana ny nandamina azy ireo, izay samy liam-baovao sy te hahita ny zava-niseho, ka niditra an-tsehatra nanao ny fandaminana ny zandarimariam-pirenena. Saika isan’andro no handrenesana loza mahatsiravina tahaka izao, ary matetika, dia vokatry ny tsy fitandremana na ho an’ny mpamily na ho an’ny hafa. Rehefa ho avy tokoa ny loza, dia tonga dia tsy hampoizina mihitsy, ka tonga amin’ny fitenenana hoe patsa iray tsy omby vava, ka ny mailo sy mitandrina, ary manaja ny lalàna hatrany no fisorohana tsara indrindra.